Bacda Dugsiga Shiinaha Shirkado - Jumlad & Soo iibso Dhimista Boorsada Dugsiga - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri >Boorsooyin > Bacda dugsiga
(1) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamkani gebi ahaanba waa bilaash. (2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saarka badeecada dalabka waqtiga la......
(1) Boorsadan hal-garabka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, xirashada caabbinta, muddada dheer ee adeegga, shaqeynta badan, iwm. (2) Marka aad aadeyso iskuulka iyo safarka, waxaad leedahay meel weyn oo lagu keydiyo. , Qaybaha shaqooyinka badan. Dharka biyuhu xiraan, o......
(1) Tixgeli inta qalab ee aad qorsheynayso inaad sidato iyo inaad ubaahantahay jeebado iyo shaqooyin gaar ah. Haddii aad haysatid laptop, waxaad u baahan kartaa boorso boorso leh shaashad difaac ah oo ku dhex jirta laptop-ka. Laptop-yada qaar way ka waaweyn yihiin, markaa waxaad u baahan tahay boors......